एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन पुरूषहरू ? onlinedarpan.com
Wednesday 20th of October 2021 / 01:05:56 AM
एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन पुरूषहरू ?
यौनको मामलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न । तर एक स्वस्थ तथा वयस्क पुरुषले यौनको चरम सुखानुभोगको आधार मा उसको यौनको मात्रा तथा तथा गन्ति गर्न सकिन्छ । पुरुषहरु मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यो अवस्था दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ ।
आफ्नो मित्रलाई सधैं सोध्नुस् कि तपाईंलाई उनको स्तन चुस्नको लागि अनुमति छ कि छैन । किनकी त्यो सबैलाई मन नपर्न सक्छ । मञ्जुर भएको खण्डमा जिब्रोको टुप्पोले सुस्तरी स्तनको मुन्टोलाई खेलाउनुहोस् । फलस्वरुप तपाईंको यौन साथीको लिंगलाई सधैं खडा गरिरहन्छ । तत्पश्चात तपाईंले लामो समयसम्म आफ्नो पार्टनरलाई यौनको मज्जा लिन/दिन सक्नुहुन्छ ।सत्य कुराको सहयोगमा